ziyehla Umatshini ibhanti uhlobo ladubula imbabala - China Qingdao Antai Industry Heavy
endleleni wadubula imbabala machine
1) ivumela amalungu ukuba wawiswa ngaphakathi, ukuqinisekisa nokuba Ngokufutha kwayo yonke imiphezulu. Le ibhanti yenzelwe kukuchasa obalaseleyo lingonakali, kwangaxeshanye yokukhulula namkunyela eliphezulu umthwalo.
2) lungisa ivili udubulo nesantya nebhanti esekelwe uhlobo zezibonelelo ukuphathwa, wadubula yethu ugcinwa neenkqubo ukuqinisekisa ukusebenza eliphezulu.
3) Ngenxa yabo idibene phambili / shiti intshukumo ye zokwakha, wadubula umatshini ibhanti ugcinwa iinkqubo ukuqinisekisa iingenelo elininzi ngokwemiqathango igqityiwe imbonakalo namaxesha elifutshane processing.
4) Isebenzisa high speed cantilever uhlobo centrifugal amavili injini nokuphalazeka kwelifu, nto leyo kakhulu ukuphucula ukusebenza ukucoca kunye nokusebenza. Zonke amavili udubulo iyahlolwa ukulingana eliguqukayo, nto leyo eyenza kube lokungcangcazela ngaphantsi nengxolo.
5) Amanqaku of iincakuba, khetha ubucaka esirhabaxa, kwaye ebuhlanti yokulawula chrome ophezulu, nto leyo ingasetyenziswa iiyure 500. Enye indlela Taiwan wenza iincakuba izinto ezikhethekileyo, nto leyo eye iiyure 1000-1600 ebomini.
6) Le ibhanti umatshini unemali irabha kunye ngentsimbi manganese.
7) umqokeleli uhlobo ibhegi Pulse jet uthuli, ubuchule uthuli yazisusa phezu 99%. Good ukhuselo lokusingqongileyo. A Uhlobo iCartridge umqokeleli uthuli uyakwazi ukulawula xi uthuli oluphantsi 50 mg / m3.
8) umlayishi oluzenzekelayo for okukhulu imveliso okuqhubekayo eqhagamshelwe umgca wemveliso. (Uyazikhethela)
9) cylinder Air ucango eqhutywa, ukusebenza lula uphawu elungileyo.
into units Q326 QR3210 15GN 28GN
Imveliso T / h 0.6-1.2 1.5-2.5 5-6 10-12
imali ukondla ikg 200 600 1300 3500
ubunzima obukhulu msetyenzana eyodwa ikg 10 30 230 363
Enobubanzi ekupheleni disk mm Ø650 Ø1000 Ø1092 Ø1245
umthamo olusebenzayo M 3 0,15 0.3 0,43 0,79
Shot-ukuqhumisa amandla Kg / min 100 250 480 700
umthamo Air for dedusting M 3/ h 2200 5000 5300 6500
Ukutya umbane kW 12.6 24.3 49.3 64,5
ulwandlalo dimention mm 3681 * 1650 * 5800 3972 * 2600 * 4768 4597 * 3262 * 5709 5300 * 5432 * 6814
Ziyehla / qha / yerabha ladubula ibhanti xa kuthe kwakho imbabala umatshini ngendlela zokucoca
Ziyehla / qha / yerabha ladubula ibhanti ugcinwa iinkcukacha machine
Ukuqhumisa kwikhabhinethi isakhiwo engaphakathi, ibhanti irabha kunye nesiphelo disk
Ukuqhumisa cabinet isakhiwo engaphandle picture
ikheshi Mazize, isahluli
inkqubo yolawulo zombane, leri yesondlo, abagcine
QR3210 ladubula ukuqhumisa umatshini ekulayisheni ukothula isixhobo
abathengi bethu batyelela efektri yethu
4sets QR3210 umatshini ibhanti ladubula ufakelo umatshini blasitng e Pakistan
1set QR3210 umatshini ibhanti ladubula ufakelo umatshini blasitng e Pakistan
Previous: Lothuli shot isigubhu Umatshini kwakho imbabala
Next: Isitimela shot swa Umatshini kwakho imbabala
Billet Ukuze Susa Skin oxide Shot ukuqhumisa Cleaning Machine
carbon Steel Shot kwakho imbabala Machine
Concrete Shot Blaster Sale
Shot eziphathekayo ukuqhumisa Equipmentconcrete Shot imbabala Machine
Shot eziphathekayo ukuqhumisa Machine Price
Eziphathekayo Shot-imbabala Machine
yokuthutha Shot xa kuthe kwakho imbabala Machine
Floor Shot ugcinwa Imishini
Foundry Equipment Of Shot imbabala Machine
Highway Bridge Shot Used imbabala Machine
shot Mobile xa kuthe kwakho imbabala Machine
Shot Mobile ukuqhumisa Matshini For Construction Road
Profile Steel Shot udubulo Machine
Rebar Shot xa kuthe kwakho imbabala Machine
Road Shot xa kuthe kwakho imbabala Machine
Road Surface Shot kwakho imbabala Machine
Shot ngokufutha Ukucoca Machine
Wadubula kukhala Floor Machine
Udubulo wadubula Track Machine
Shot ngembabala Painting Line
Wadubula ukuqhumisa Machine Aluminium
Shot imbabala Matshini Ngokuba eziphathekayo
Wadubula ukuqhumisa Machine kwemifanekiso
Shot xa kuthe kwakho imbabala Machine Price
Wadubula Machine ukuqhumisa Nge 2 Twin Motors
Wadubula ukuqhumisa Machinery For Steel Bar
Shot xa kuthe kwakho imbabala Machines Isetyenziswa
Wadubula ukuqhumisa Material
Small Size Shot imbabala Machine
Used Shot ukuqhumisa izixhobo Sale
Shot zisetyenziswa xa kuthe kwakho imbabala Machine